Baaq Caawimo ( Abwaan Baarleex ) oo Gurigiisa Xanuun Jiifa Umada Somaliyeed, Siiba S/Land Ilaahay Dartii hawgu gurmadaan....
Monday January 29, 2018 - 03:46:34 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Ilaahay isugu naxariista Dhulka ana Samada ayaan idiinka naxariisan ayuu yidhi, waxa warbaahinta ku jira
Nin Odaya oo Abwaana oo Baarleex la yidhaa, oo Xanuun, wax la,aan ay isugu darsa,meen, oo weliba ku
xujeeyey Madaxda S/Land & xisbiyadaba in loogu gurman waayey haybta uu yahay oo ah abooye.
Hadaba, Xisbiga Wadani & Ciraba ninka Odeyga ah ee Haybta uu yahay ka sokow, Xukuumada & Muuse
ku fogeeyeen, kaga jareen Lacagtii yarayd ee Gunada ahayd, oo ay yidhaahdeen Wadani darteed oo aad
ahayd ayaa Gunadii aad ka qaadan jirtey Somaliland & xukuumada lagaaga jarey.
sidaas Darteed, Muuse & kulmiye Shicibka S/land awalba iyagoo qabiil & jeegaan & reero ugu kala badin
jirey, Hanti dawladeed, ashaariic 7 aas nuujin Dad gaara aha, ayaa imikana Cudur ka sii weyn oo ah eegaan
laba reera uu galay, oo qolooyinka aan jeegaanta H/Awal & H/Jeclo ahayn aanay kimis ka cunayn Wadanka
hadana weliba u sii dheertey wixii Xisbiga Wadani ku abtirsada.
Sidaas Darteed, Ninka Odeyga ee Hasrgeysa ku xanuusanaya, ee cid kasta oo somaliyeed qaylada u dirtey
Somaliland, Somaliya, Jabuuti. Kilka shanaad Ilaahay dartii halagu caawiyo, Siiba Xisbiga Wadani & Shirkada
Telesom ee uu carabka ku dhuftey.
Ilaahay dartii Ninka odeyga haloogu gurmado oo Caafimaad & danyarida uu ka cawdayba wax loogu qabto.
Ilaahay isu naxariista ayuu yidhi ana waan idiin naxariisane.